N'ihi na ọsọ na ịdị mma bụ isi maka njem ụgbọ oloko Winter na Italy, ị nwere ike ịga niile na mba n'elu ebe ngwa ngwa na comfortably. Ebe a na-n'elu obodo ise gaa ụgbọ okporo ígwè na Italy a oyi.
Winter na Venice pụtara dị ọcha, crisp ikuku na ole na ìgwè mmadụ megharịa gị si na ya mara mma. Enwe a gondola ride ma ọ bụ mụọ kọfị na akụkụ ahụ. E nwere bụ mgbe ohere nke ìhè snoo na-ada ka gị Venice ahụmahụ ọbụna ihe kpokọtara.
Ịzụ a tiketi na onye ọdụ bụ mgbe otu nhọrọ. Otú ọ dị, a kwadebere maka ogologo edoghi na mgbaka, na elu ahịa. Na nke a na ụbọchị na afọ, ọ na-na-ahụkarị na-edebe gị ụgbọ okporo ígwè oche online. Mgbe ọ na-abịa otú anya tupu ị pụrụ ịzụta gị tiketi, azịza ga-adabere na ụdị Italian ụgbọ okporo.
Ụgbọ oloko Frecce bụ elu-ọsọ ụgbọ oloko na-agba ọsọ n'etiti Italy si isi obodo. Ị nwere ike ịzụta gị tiketi ka n'oge dị ka ọnwa anọ tupu njem gị ụbọchị. na nso nso, Trenitalia mara ọkwa na ọ ga-amụba ya ntinye akwụkwọ mmiri ka 6 ọnwa n'ihu.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwinter-train-travel-italy%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)